ကလိုစေးထူး: သင်တန်းကျောင်းနဲ့ Second Round
နေဇာက တကယ်ကြီးကို ပြောင်းလဲသွားတာပဲး) မသိရင်မှတ်ဆိုတဲ့စကားကို အသေချာကြီးကို မှတ်သွားတယ် ..ဘာတဲ့ “ခေါ်ရင်လာ၊ ခိုင်းရင်လုပ်၊ ခံမပြောနဲ့၊ ” မှတ်သားလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ :Pစစ်စည်းကမ်း ဖောက်ဖျက်နှင့်ပြီးသား လူတွေက ခေါင်းဆောင်မှု နေရာတွေမှာ နေရာရဦးမယ် ..... ဒါဆို ခေါင်းဆောင်တွေက စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တာနဲ့ ကျင့်သားရနေတာကိုးး ဂလိုကိုးးးပေါက်ပြီးး.. နေဇာ့ ဇတ်ကြောင်း ကို သိချင်စိတ်တွေ များလာတယ် အစ်ကိုရေ့ ။
Dec 14, 2008, 11:22:00 PM
စာအရေးအသား အကြောင်းအရာ ပြောစရာမရှိ။ အရမ်းကောင်း။
(တပ်အကြောင်းဖတ်လို့ တပ်လေသံနဲ့ ခပ်ပြတ်ပြတ် ပြောသွားတယ် :) )
Dec 15, 2008, 12:40:00 AM
အကိုရေ အကို့ ပို့စ်တွေက ဗဟုသုတ အများကြီးရတယ်ဗျ. ကျွန်တော် လည်းနေဇာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ စိတ်ဝင်စားနေတယ်အကို
Dec 15, 2008, 12:45:00 AM
အကိုစေးထူးရေ နေဇာ အကြောင်းလေး ကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲ လေးစားလျက်
Dec 15, 2008, 12:56:00 AM
“ခေါ်ရင်လာ ခိုင်းရင်လုပ် ခံမပြောနဲ့” ... တပြည်လုံးကို အဲဒီဇာတ်သွင်းနေတာထင်ရဲ့... ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကလဲ အဲဒီလိုပဲ... ခေါ်ရင်လာ ခိုင်းရင်လုပ် ခံမပြောနဲ့...
Dec 15, 2008, 1:25:00 AM
အကုန်သိတယ်လို့ ပြောတော့လဲ မကြိုက်ဘူး။ ရေးထားတာများစုံစိလို့ တကယ်ကို တပ်သားသစ်များ ၀င်လုပ်ခဲ့ဘူးသလား အောက်မေ့ရတယ်။
သူတို့အောက်မှာ ဟန်းကောနဲ့ ရေဗူးလဲရှိသေးတယ်ဗျ။ ပြီးမှ မြေကြီးလာမယ်ထင်တယ်။ စိတ်မထင်ရင် အဲဒါကို အရင်ကန်တတ်ကြတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးတယ်။
Dec 15, 2008, 12:57:00 PM
ဟေ့... အာဆီယံဒိုက်တို့ အာဆီယံရိုလာတို့ကော မင်းမသိဘူးလား ... အာပလာ အတင်းစေးထူး .. မသိတဲ့ လူတွေ ကို ဖြီးမနေပါနဲ့ကွာ...ကြားဖူးနားဝတွေနဲ့ ...မင်းက တပ်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့ဖူးလို့တုန်း ....
Dec 15, 2008, 4:59:00 PM
Dec 16, 2008, 6:53:00 AM
တပ်သားသစ်လေးတွေ မတ်ပဲပြုတ်အရည်ကြဲလေးတွေနဲ့ ထမင်းစားနေတာကို အခုထိမြင်ယောင်တုန်းပဲဗျာ.....
Dec 16, 2008, 10:19:00 AM
Hi Ko Sayhtoo, Please continue to write. It's interesting. I'm looking forward to your new posts.
Dec 17, 2008, 8:26:00 PM
မောင်မျိုးကတော့ ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်တိုင်း အရင်ဆုံးရောက်လာတတ်တဲ့ အမာခံ စာဖတ်သူပါပဲလား။ :) နောက်ထပ် လာဦးမှာတွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် မောင်မျိုးရေ...၊ စောင့်သာဖတ်ပေတော့။
မချိုသင်း...၊ ဟုတ် (တပ်လေသံ ခပ်ပြတ်ပြတ်ပဲ) :D
ဗမာပြည်သား၊တောင်ပေါ်သား ဟုတ်ကဲ့ ကျနော် ဆက်ရေးမှာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
Andy...၊ အကိုတွေးသလို ကျနော် မတွေးလိုက်မိဘူးဗျာ။ :)
လင်းပျာ (မချိုသင်း ခေါ်သလို လိုက်ခေါ်တာ :P) အကုန်တော့ မသိရတာ အမှန်ပါဗျာ။ :D တပ်ထဲလဲ မ၀င်ဖူးပါဘူး။
ကိုတက်လူငယ်...၊ ဟုတ်ပဗျာ။ :)
anonymous ပြောချင်ရင် ရေးသူ ကျနော့်တယောက်ထဲကိုသာ အားရှိပါးရှိ ပုတ်ခတ်ပါဗျာ။ ရေးသူထက် ပိုတော်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုတော့ ဘာမှမသိတဲ့လူတွေလို့ ရောချပြီး မပုတ်ခတ်ပါနဲ့။ ကျနော်ရေးထားတာတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မဟုတ်တဲ့ အချက်ကို ပြန်ချေပနိုင်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေကို ကြိုဆိုထားပြီးသားပါ။ :) အတင်းစေးထူး လို့ ခေါ်တော့ မိတ်ဆွေကြီး ဇော်မျိုးကိုတောင် သတိရမိသေး။ :)))
နေဇာ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ နောက်ထပ် ရေးဖို့ အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ အားပေး ဖတ်ရှုကြတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Dec 17, 2008, 10:04:00 PM